August 2020 – हाम्रो देश
Posted on 31/08/2020 by हाम्रोदेश
एजेन्सी । भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन भएको छ । दिल्लीस्थित सेनाको अस्पतालमा उपचाररत उनको सोमबार निधन भएको हो । ८४ वर्षीय पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीको निधन भएको उनका छोरा अभिजितिले ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । सोमबार अस्पतालले दिएको जानकारीअनुसार उनको फोक्सोको संक्रमणका कारण उनलाई सेप्टिक सक भएसँगै अवस्था गम्भिर बन्दै गएको थियो
चितवनमा कोरोना संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु
चितवन । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमित एक जनाको मृत्यु भएको छ । भरतपुर अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ६ का ७८ वर्षीय पुरूषको उपचारको क्रममा सोमबार विहान ७ बजेर २० मिनेटमा मृत्यु अस्पतालको कोभिड उपचार संयोजक डा. प्रमोद पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ती पुरुषलाई भदौ २ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
काठमाडौं । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर (आईपीओ) आज सोमबार बाँडफाँट हुने भएको छ । संस्थाले निश्कासन गरेको ८६ हजार कित्ता आईपीओ सोमबार बाँडफाँट हुने भएको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा दिउँसो बाँडफाँट गरिने तय भएको छ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससँगै समाजले पनि आईपीओ निश्कासन गरेको थियो । रिलायन्सको गत शुक्रबार नै बाँडफाँट भइसकेको
नेपालीको भान्सामा इथियोपियाको बेसार, भितनामको मरिच
Posted on 30/08/2020 by हाम्रोदेश
लिभिङ ग्लोबल्ली, थिङ्किङ लोकल्ली काठमाडौं । हामीले दैनिक भान्सामा उपभोग गर्ने तरकारी र खाद्यान्नको स्रोत के होला ? विश्वनगरको एउटा गल्लीमा रहेको नेपालले अहिलेसम्म पनि स्वाभिमानको नारा घन्काइरहँदा हामीले खाने र उपभोग गर्ने वस्तुहरू कहाँबाट आउलान् ? यस विषयमा धेरै जानकार नै छन् । हरियाणाको चामल, उत्तर प्रदेशको साग, बिहारको खुर्सानी र हैदरावादको तेलले नेपालीको
काठमाडौं : मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै आइतबार मनसुनको न्युन चापीय रेखा नेपाल भन्दा दक्षिणतर्फ तर्फ रहेको र भारतको मध्य प्रदेश तथा आसपासको क्षेत्रमा न्युन चापिय प्रणाली अवस्थित रहेको छ र उक्त प्रणाली विस्तारै पश्चिम–उत्तरपश्चिम दिशा तर्फ सर्दै गएको जनाएको छ । महाशाखाले जारी मौसम पूर्वानुमानमा हाल प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी
डिसी – मेरिल्याण्ड र पेनसेलभेनियाका लागि महा बाणिज्यदूत तथा वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महत तथा उनकी धर्मपत्नी कविता महत कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् । गत अगस्त ७ दिन आफू दम्पत्तिलाई कोभिड–१९ भएको सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत यस्तो समस्या कसैमा देखिएको छ भने लाज नमानीकन कोरोनालाई गोप्य नराखी समुदायलाई सुसूचित गर्न समेत अनुरोध
काठमाडौं । ग्लेन फिलिप्सको अर्धशतक र कार्लोल ब्रेथइटेको उत्कृष्ट बलिङ मद्दतमा जमैका तल्लावाहजले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा तेस्रो जित हात पारेको छ । नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछानेले २ विकेट लिएको उक्त खेलमा जमैकाले सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रिओट्सलाई ३७ रनले पराजित गरेको हो । ६ खेलमा ३ खेल जितेको जमैकाले ६ अंक नै जोडेको छ
काठमाडौं : शनिबार भारतमा कोरोनाका ७६ हनार ४ सय ७२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । बिहिबार र शनिबार भेटिएका संक्रमितको तुलनामा यो थोरै कम हो । बिहिबार ७६ हजार ८ सय २६ संक्रमित भेटिएका थिए भने शुक्रबार ७६ हजार ६ सय ६५ संक्रमित फेला परेका थिए । तर लगातार यति ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिन थालेपछि
काठमाडौं : प्रक्षेपण १ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका २ निकायले देशव्यापी रुपमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिइरहे नेपालमा ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा कोरोना लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। प्रक्षेपणअनुसार हो भने देशव्यापी समुदाय तहमा कोरोना फैलिए र समयमा उपचार नपाएको अवस्थामा सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ४९ हजार २ सय जनाको मृत्यु हुनेछ। प्रक्षेपण २ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै पनि सुरुमा
चितवन : एकै दिन शनिबार जिल्लाका १०२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गर्न आएका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा भेटिएका ६५ जनामध्ये ६१ चितवनका हुन् । धुलिखेल पठाइएको नमूनाको परीक्षणमा १२ जना चितवनका सङ्क्रमित देखिएकका छन्